Amanqaku kaShane Barker Martech Zone |
Amanqaku ngu Shane Barker
Iingxelo zokuziphatha kukaGoogle zoVavanyo: ziluncedo ngakumbi kunokuba usazi!
NgoLwesibini, Septemba 22, 2015 NgoLwesibini, Septemba 22, 2015 Shane Barker
Uhlalutyo lukaGoogle lusinika uninzi lwedatha ebalulekileyo yokuphucula ukusebenza kwewebhu. Ngelishwa, asisoloko sinalo ixesha elongezelelekileyo lokufunda le datha kwaye siyenze into eluncedo. Uninzi lwethu ludinga indlela elula nekhawulezayo yokuvavanya idatha efanelekileyo yokuphuhlisa iiwebhusayithi ezingcono. Yiyo kanye le apho iingxelo zokuziphatha kukaGoogle zingena khona. Ngoncedo lwezi ngxelo zokuziphatha, kuya kuba lula ukukhawulezisa ngokukhawuleza ukuba umxholo wakho
Uhlalutyo lukaGoogle kutsha nje longeze into epholileyo ukuhlalutya ukulibaziseka kweendwendwe zakho ezaziwa njengohlalutyo lweqela, eluhlobo lwe-beta yomhla wokufumana kuphela. Ngaphambi kolu kongezwa kutsha, ii-webmasters kunye nabahlalutyi abakwi-Intanethi ngekhe bakwazi ukujonga impendulo elityazisiweyo yeendwendwe zewebhusayithi zabo. Kwakunzima kakhulu ukumisela ukuba ngaba abatyeleli be-X bandwendwele indawo yakho ngoMvulo emva koko bangaphi kubo abatyelelayo ngosuku olulandelayo okanye